Barnaamijka Jidadka ayaa ka caawinaya ardayga inuu hamigiisa u beddelo xirfad ku habboon | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Juun 1 , 2021
Ciyaartoyga kubbadda kolayga ee Ponies Gionna Carr waxay had iyo jeer ka fikirtaa sidii ay jacaylkeeda isboorti ugu beddeli lahayd xirfad, laakiin ma aysan hubin sida ay u tahay. Jidkeedu wuxuu noqday waxoogaa cad, si kastaba ha noqotee, wadahadal lala yeeshay Bob Manning, iskuduwaha Wadooyinka Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare. Manning wuxuu u soo jeediyay waayeelka inuu qaato qiimeyn xirfadeed oo la yiraahdo YouScience. Barxadku wuxuu kashifayaa awoodaha ardayda, waxay la jaan qaadayaan shaqooyinka, waxayna siinayaan jawaab celin shaqsiyadeed oo ku saabsan sida awooddooda looga faa'iideysan karo iskuulka, shaqada, iyo nolol maalmeedkooda.
Carr wuxuu qaatay qiimeynta khadka tooska ah wuxuuna la kulmay Manning si uu uga gudbo natiijooyinka. Way ku faraxsaneyd inay barato inay ahaato wakiil isboorti inay tahay xirfadda ugu fiican ee iyada ku habboon.
"Waxay ahayd qabow markaan arkaayay taas soo socota," ayuu yiri Carr. Waxaan u maleynayaa inaan runtii ku fiicnaan lahaa. ”
Manning wuxuu ku xiray Carr Kate Foley, oo kormeera xiriirka bulshada iyo suuqgeynta Basketball-ka Octagon. Foley waxay mataleysaa dhowr ciyaartoy oo xirfadlayaal ah oo ay kujiraan Steph Curry Golden State, Elena Delle Donne oo ka tirsan Washington Mystics, iyo ilaaliyaha Minnesota Timberwolves Jarrett Culver.
Carr waxay diyaarisay kulan Ballaaran oo ay la yeelatay Foley si ay wax badan uga ogaato dariiqeeda shaqo, waxayna labadoodu wada hadleen hal saac iyo badh. Ka dib markii ay mid-mid ula hadashay Foley, Carr waxay sheegtay inay xitaa aad ugu qanacsan tahay inay rabto inay noqoto wakiil isboorti.
"Wax badan ayaan nafteyda ku arkaa Kate," ayuu yiri Carr. Waan jeclahay sida ay u tahay gabar madax ka ah goob ragga u badan.
Ka dib markii ay la kulantay Carr, Foley waxay sidoo kale timid dugsiga sare si ay ula hadasho fasalka SAHS Sports iyo Society shaqadeeda. Markii dambe, waxaa ku weheliyay ilaaliyaha Timberwolves Jarrett Culver hoolka halkaas oo ay uga jawaabeen su'aalo koox tiro badan oo arday ah. Foley waxay weydiisatay Carr inay soo bandhigto oo ay hogaamiso kulanka su'aasha iyo jawaabta si ay u siiso qibrad ay ku hadasho dadweynaha.
Carr ayaa ku faraxday fursada waxayna sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ka soo qayb gasho Jaamacadda Tennessee State Dayrta oo ay bilawdo safarkeeda si ay u noqoto wakiil isboorti.
Barnaamijka Wadooyinka dugsiga sare wuxuu ku saabsan yahay ka caawinta ardayda inay sahamiyaan danahooda oo ay la xiriiraan xirfadlayaal ku xeel dheer xirfadaha kala duwan Ardaydu waxay fursad u leeyihiin inay soo bandhigaan kartidooda iyo waxa ay xiiseeyaan, ka helaan khibradaha dhabta ah ee dunida xagga warshadaha maxalliga ah iyo la-hawlgalayaasha bulshada iyo xulashada koorsooyinka u dhigma himilooyinkooda xirfadeed.
“Isku xirka ardayda iyo xirfadleyda dhanka xirfadaha xiisaha leh waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee ay Pathways bixiso - waana sahlan tahay,” ayuu yiri Manning. "Ardayda kaqeyb qaadata khibradaha sidan oo kale ah waxay leeyihiin dareen ujeeddo oo soo cusboonaatay, waxay fiirinayaan ku habboonaanta shaqada iskuulka waxayna gaarayaan guulo badan oo hadda iyo mustaqbal ah."
Ka baro wax badan oo ku saabsan barnaamijka Tubbada ee stillwaterschools.org/pathways.